Sajhasabal.com | Homeके तपाई प्राइभेट जागिरमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने यी कुराहरु ख्याल राख्नुहोस्
जीवन चलाउनु छ, केही गर्नु छ, केही बन्नु छ, केही कुरामा आफैंलाई जाँच्नु छ । हरेक अवस्थामा विकल्प बन्नसक्छ जागिर । आम मानिसको मानसिकता, सपना, लक्ष्य अनि बाध्यता पनि हो जागिर ।
जब कुनै जागिरमा प्रवेश गर्ने विचार गरिन्छ, सर्वप्रथम पैसाकै सवाल उठ्छ, सोधिन्छ- पैसा कति हुन्छ ? पहिलो जागिरपछिको तलब हात पर्दा जति खुसी भइन्छ त्यो अकल्पनीय हुन्छ । अनि कुनै सोचविचार नै नगरी पैसा खर्च गर्नसमेत पछि परिँदैन । त्यसरी पैसा खर्च गर्नु ठीक छ कि छैन भन्ने कुराको हेक्का राखिँदैन ।
अविवाहित हो भने त हरेकपटक तलब आएपछि साथीभाइसँग जमघट, घुमघाम, मोजमस्ती । पैसा सकिन के बेर, तर विन्दास बन्छ जीवन । ठानिन्छ, सधैं यसरी नै चल्छ समय ।
प्राइभेट जागिर छ भने यस्तो हिसाबले अघि बढ्दा जीवनमा थुप्रै समस्या देखा पर्न सक्छन् । पैसा जतिसुकै बढी भए पनि त्यो दियो नहुन सक्छ । कतिखेर जागिरबाट हात धुनुपर्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन । कम्पनीले अचानक निष्कासन पत्र थमाइदिन पनि सक्छ । यस्तो नहुन पनि सक्छ तर सचेत रहँदा के बिग्रन्छ र ? त्यसका लागि केही कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ जसले भविष्य सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ । दुःखको समयमा भरोसा मिल्छ ।
ब्याकअप वा जगेडा कोष
जागिर गइहाल्यो भने के गर्ने ? अर्को जागिर खोज्न कति समय लाग्ला ? विशेषज्ञहरूको भनाइमा नयाँ जागिर खोज्न औसत ४ देखि ६ महिना लाग्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता भए पनि नेपालको सन्दर्भमा पनि धेरै हदसम्म मिल्छ । तसर्थ सदैव ४ देखि छ महिनाको तलब बराबरको रकम ब्याकअप वा जगेडा कोषमा राख्नुपर्छ । यसका लागि एउटा बैंकमा खाता खोल्ने, सामान्य अवस्थामा त्यसबाट पैसा नझिक्ने वा त्यहाँ पैसा छ भन्ने कुरा नै बिर्सिदिने, केवल समय-समयमा नियमित जम्मा गर्ने काम मात्र गर्नुपर्छ । यति समयजतिको वा सकिन्छ भने अलिक बढी पैसा बचत गर्न सके जागिर गइहालेछ भने पनि खासै समस्या बेहोर्नुपर्दैन ।
पारिवारिक व्यवस्थापन कोष
जागिर गइहालेको अवस्थामा अनेकौं चिन्ता आइलाग्नसक्छन् । परिवार कसरी चलाउने, बालबालिकाको स्कुल फी अनि बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने किसिमको प्रश्न खडा हुनसक्छ । यस कुरालाई विचार गरेर केही रकम सर्ट टर्म पोलिसीमा कहीँकतै लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसो गर्दा आपत् परिहालेको दण्डमा उक्त रकम निकालेर निर्धक्क खर्च गर्न सकिन्छ ।
यो अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा नौलो लाग्न सकिन्छ किनभने हामीमध्ये धेरैमा इन्स्योरेन्सका विषयमा वास्तविक ज्ञानको अभाव छ । हिजोआज भने बिस्तारै मेडिकल इन्स्योरेन्स गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ । यो निकै राम्रो उपाय हो । यसबाट आफू वा परिवारका सदस्य गम्भीर बिरामी परेको अवस्थामा ठूलो सहयोग मिल्छ, राम्रो अस्पतालमा उपचार गराउन सकिन्छ । यसका लागि खुलेका इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा तिनका एजेन्टहरूबाट आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ ।
अमला नियमित खानुहोस्, यस्ता छन् फाइदै फाइदा
मेकअप बिनानै सुन्दर र आकर्षक बन्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ८ तरिका
निमोनिया भनेको के हो ? यसका लक्षण र बच्ने उपाय यस्ता छन्